Rakkoo Uummataa Sadarkaa Yaadaa Qofatti Dubbatanii Darbuun Furmaataf Nageenya Biyyatti Kan Eegsisu Miti | QEERROO
Posted on May 17, 2018 by Qeerroo
Qore Bulaan maal keessa jira.
Uummanni Oromoo naannoo magaalaalee jiraan haala akkamii keessa jiru
Daldalaan Oromoo maal keessa jira.
Uummanni Oromoo naannoo Waarahaa jiru rakkoo akkamiif saaxilame.
Barataan Oromoo rakkoo akkamii keessa jira?
Hojjetoota Mootummaa Oromoo bsoon